महरालाई अर्को आपत, फेरी भयो मुख देखाइनसक्नु ! - jagritikhabar.com
महरालाई अर्को आपत, फेरी भयो मुख देखाइनसक्नु !
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरालाई अर्को आपत आइलागेको छ ।
पूर्व सभामुख समेत रहेका महराले दुई दिन अघि मात्रै सार्वजनिक रुपमै कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न नहुने अभिव्यक्ती दिएका थिए । तर उनी बोलेका दुई दिनमै माओवादीनै एमसीसीको मरियार रहेको रहस्य खुले पछि महरालाई मुख देखाइनसक्नुको अवस्था आइलागेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र आफुले एमसीसी पास गर्छौै भनेर हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई बुझाइसकेको खुलासा गरिदिए पछि बाहिर बाहिर एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने महराहरुको पनि असली अनुहार बाहिर आएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले पनि पछिल्लो समय एमसीसी विरोधी जस्तो आभाष दिने गरि अभिव्यक्ती दिँदै आएका थिए तर आजै मात्रै देउवाको मिडियाको अगाडी प्रचण्डको पोल खोलिदिएका छन् ।
देउवाको अभिव्यक्ती पछि एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्न नहुने बताउँदै आएका कृष्णबहादुर महराहरु लाजले पानी पानी भएका छन् । देउवाको यस्तो अभिव्यक्ती पछि राजनितिक वृतमा यसले ठूलो चर्चा पाएको छ । प्रचण्डको मुकुण्डो उत्रिएको भन्दै समाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।
कतिपय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले प्रचण्ड र महराहरुलाई लाजको पसारो भन्दै अब कुन माक्सले मुख छोपेर हिड्छौ ?भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । देउवाको यस्तो अभिव्यक्ति पछि माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका कोही पनि नेताहरुले अहिले सम्म केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
प्रचण्डलाई नसोचेको फसाद, यस्तो बेलामा हाँस्ने की रुने ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड रुनु की हाँस्नुको फसादमा परेका छन् ।
एक साता लामो विदेश भ्रमणबाट नेपाल फर्कने वित्तिकै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको समेत नाम मुछेर फ्याट्टै पोल खोलिदिए पछि प्रचण्डको बल्ड प्रेसर ह्वात्तै बढ्ने अवस्था आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले गोप्य रुपमा अमेरिकालाई पठाएको पत्रबारे देउवाले खुलासा गरिदिए पछि प्रचण्डलाई छट्पटी भएको छ । एमसीसी पास गर्छौ भनेर देउवा र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई पत्र दिएका रहेछन् जुन कुराको खुलासा आज देउवाले गरिदिएका छन् ।
प्रचण्डलाई आज देउवाले यस्तो कुराको खुलाासा गरिदिएर तनाव मात्रै दिएका छैनन् अर्को खुशिको खबर पनि दिएका छन् । गठबन्धन चुनाव सम्मै जाने भन्दै देउवाले कसैलाई पनि कुनै पनि शंका नगरिदिन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
काग्रेसको साथ नपाए माओवादीको अस्तित्वनै समाप्त हुने ठानेर गठबन्धन गठबन्धन भन्दै हिँडेका प्रचण्डलाई आजको देउवाको बोलीले केहि राहत भने पक्कै मिलेको छ । काग्रेसकै नेताहरुले कसै सँग पनि आगामी निर्वाचनमा काग्रेसले गठबन्धन नगर्ने बताइरहेका बेला देउवाको यस्तो भनाइ आएको हो ।
एकातिर गठबन्धन चुनाव सम्म गर्ने देउवालको बोलीले प्रचण्डलाई खुशि मिलेको छ भने अर्का तिर गोप्य रुपमा हस्ताक्षर गरेर एमसीसी पास गर्छो भनेर अमेरिकालाई पठाएको पत्रबारे देउवाले फ्याट्टै पोल खोलिदिए पछि प्रचण्डलाई तनाव थपिएको छ ।
करिब ३ मिनेट मात्रै बोलेका देउवाले प्रचण्डलाई रुने की हाँस्ने हुने गरि कन्टेन्ट दिएका छन् । देउवाको आजको अभिव्यक्तीले राष्ट्रिय राजनिती पनि निकै गर्माउँने संकेत दिएको छ । एमसीसी तत्काल पास गर्ने आशय देउवाले व्यक्त गरेका छन् ।